Xildhibaanada Aqalka Sare oo si rasmi ah u asnxiyey sharciga Isgaarsiinta • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xildhibaanada Aqalka Sare oo si rasmi ah u asnxiyey sharciga Isgaarsiinta
Xildhibaanada Aqalka Sare oo si rasmi ah u asnxiyey sharciga Isgaarsiinta
August 21, 2017 - By: Mohamed Jeenyo
Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah ansixiyay Xeerka Isgaarsiinta Qaranka oo ay hore u soo ansixiyeen Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya 9-kii bishan Agoosto.
Sharcigan ayaa waxaa oggolaaday 39 ka mid ah 40kii mudane ee fadhiga soo xaadirtay ka dib markii ay ka doodayeen tan iyo maalintii Sabtida ee la soo dhaafay. Sharcigan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee uu ansixiyo Aqalka Sare tan iyo markii la aasaasay dhammaadkii sanadkii hore.
Sharcigan waxaa loo gudbinayaa mMdaxweynaha Jamhuuriyadda si uu u saxiixo ka hor intuusan dhaqan-gal noqon.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknoolojiyada Cabdi Cashuur Xasan, ayaa sheegay in sharcigan uu muhiim u yahay dalka. “Waa sharci ay in mudda ahba sugayeen dhammaan inta daneysa arrimaha isgaarsiinta,” ayuu yiri.
Cabdi Qowdhan ” Dagaalka Sool lagu xoraynayo waa Dastuuri”.